Ithegi: ubuhle | Martech Zone
Ngaba ukunganyanzelwa kweNyani kunokukuchaphazela njani ukuThengisa okuPhembelelayo?
Lwesine, Okthobha 15, 2020 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Elma Beganovich
I-COVID-19 iyitshintshile indlela esithenga ngayo. Ngobhubhani ogcwele ngaphandle, abathengi bakhetha ukuhlala ngaphakathi kwaye bathenge izinto kwi-intanethi endaweni yoko. Kungenxa yoko le nto abathengi bejongela kwiimpembelelo ngakumbi nangakumbi malunga nendlela yokwenza iividiyo kuyo nayiphi na into ekuzameni kwilipstick ukuya ekudlaleni imidlalo yevidiyo esiyithandayo. Ngakumbi kwiziphumo zobhubhane kwintengiso enefuthe kunye namaxabiso, jonga isifundo sethu samva nje. Kodwa isebenza njani kwezi zinto kufuneka zibonwe
Injini yokutshatisa uBuhle: Iingcebiso ze-AI ezizezakho eziqhuba ukuThengisa ngobuNgcono kwi-Intanethi
NgoMvulo, Julayi 27, 2020 NgoMvulo, Julayi 27, 2020 Douglas Karr
Akukho mntu wayenokuthi aqonde umphumo we-apocalyptic we-COVID-19 onokuba nawo kubomi bethu bemihla ngemihla nakwezoqoqosho kwaye ngakumbi ukuthengisa ngokuvalwa kweendawo ezininzi ezihamba phambili ezitalatweni. Yenziwe iimveliso, abathengisi, kunye nabathengi bonke bacinga ngekamva lokuthengisa kwakhona. Injini yokutshatisa Ubuhle Injini yomdlalo weBlue ™ (BME) sisisombululo kubathengisi abathile, i-e-tailers, iivenkile ezinkulu, abalungisa iinwele kunye neempawu. I-BME yinkqubo entsha enombhalo omhlophe enelebheli ye-AI eqikelela kwaye iyenze ibe yeyakho imveliso
Abacebisi baqhuba njani umsebenzi ongaphezulu kwe-Instagram kunabaphembeleli
NgoMvulo, Novemba 6, 2017 NgoMvulo, nge-18 kaJanuwari, 2021 Douglas Karr
Ngo-2019, inkcitho kwi #Infagram Influencers kulindeleke ukuba ifikelele kwi-2.3 yezigidigidi, eso sisixa esimangalisayo, kodwa sikhomba ngokuthe ngqo kumandla enkqubo ebonakalayo eyamkelwe ngokubanzi ekuphembeleleni izigqibo zokuthenga. Ngapha koko, iipesenti ezingama-72 zabasebenzisi be-Instagram baxela ukwenza isigqibo sokuthenga ngokusekwe kwimifanekiso ekwabelwana ngayo kwiqonga le-Instagram kwicala lenqaku… ungandilandela @dknewmedia! Zilungiselele ukubona itoni yeefoto zenja yam uGambino kunye nokuqhubeka kwam
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 26, 2014 NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 25, 2014 Douglas Karr
Ngokomndilili, ababhalisile bafumana imiyalezo engama-416 yokuthengisa nge-imeyile ngenyanga… zininzi ii-imeyile zomntu ophakathi. Abantu abaninzi bafunda ii-imeyile ezijongana nemali yabo kunye nohambo kunalo naliphi na elinye icandelo… kwaye kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ababhalisi ababhalisi kwi-imeyile yakho kuphela - bayabhalisela umntu okhuphisana naye. Ukuqinisekisa ukuba i-imeyile yakho yenzelwe kakuhle kwaye iyaphendula kwizixhobo eziselfowuni ubuncinci. Ukuba ne-imeyile enyanzelisayo yile